असफलताको सामना गर्न मैदानमा रहनुस् — Motivatenews.Com
काठमाडौं – जब कोही मानिस असफल हुन्छ तब असफलता नै सफलताको खुडकिलो हो या असफलताको आधार हो भनेर तपाई लाख शब्दले सम्झाउनुस् । ऊ मान्दैन । उसको मन रुन्छ । मानिसलाई असफलतामा दुःखी हुने अधिकार छ तर त्यो आँसुमा बग्नु हुदैँन । र त्यहीँ रोकिनु पनि हुँदैन ।
असफलता के हो ? एक पटक त्यसमा ध्यान दिनुभयो भने तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ । तपाई असफल हुनुमा केवल तपाई मात्र कारक होइन । आफ्नो अयोग्यता नै असफलताको कारण हो भनेर मान्ने भुल तपाईले कदापि गर्नु हुदैन ।
म अयोग्य, म केही गर्न सक्तिनँ भन्ने भाव नै मनमा ल्याउनु जायज हुन्न । एकादुई असफलता हात लाग्दैमा तपाईले आफूलाई हीन सम्झेर, नाथे ठानेर डिपे्रसन, एग्रेसन र रिग्रेसनको बाटो रोज्नु गलत हो ।
जस्तो एसएलसी या भनौँ पढाईमा लाखौँ विधार्थीहरु असफल हुन्छन् त के ती सबै अयोग्य ह्ुन् ? वास्तवमा त्यो असफलता ती विधार्थीको नभएर सरकारको पनि हो र प्रमुख असफल हुन् ती विधार्थीको नभएर सरकारको पनि हो । प्रमुख असफल हुन् ती शिक्षकहरु ।
यो देशका शिक्षक कति अयोग्य छन् भन्ने ताजा प्रमाण हो यो । त्यस कारण म भन्छु, ‘सम्पूर्ण असफलतामा दुःखी हुनुहोस् तर मैदान छोडेर भाग्नेबारे कहिल्यै नसोच्नुस् । किनभने जस्ले मैदान छोड्छ, केवल त्यो मात्र असफल हुन्छ ।’
२०७७ कात्तिक ११ गते प्रकाशित